Ngwa maka ASME Innovation Showfit gbasaa ruo Eprel 6 ($ 200,000)
Ngwa maka ASME Ihe ngosi ohuru gbaturu rue Eprel 6 ($ 200,000)
Ndị American Society of Mechanical Engineers (American Society of Mechanical Engineers)ASME) agbatịwo ngwa ndị a na 2021 ASME Innovation Showcase (BH) si March 9 ruo April 6 maka Kenya / Middle East na Africa; na Ka 3 maka US / Amerika.
Kedu ihe bụ ISHOW?
Ihe ngosi ASME Innovation bu ihe ngwaike uwa zuru oke ome osooso na-emeghe ndị mmadụ na òtù dị iche iche n’Africa, Middle East, na US / Amerika.
Ebumnuche a na-elekwasị anya n'inye ndị na-emepe emepe ihe nyiwe maka ịwulite ikike, itinye aka na ndị ọkachamara, yana imewe atụmatụ nke usoro dabara adaba maka ọhụụ ọhụụ, na-eme ka ihe ịga nke ọma ha site na COVID-19 nsogbu ụwa.
A na-akwado ihe omume ISHOW n'Africa, India, na USA, a na-anabatakwa akwụkwọ anamachọihe gburugburu ụwa.
Kemgbe mmalite ya ruo ugbu a, mmemme a enyerela ihe karịrị 160 mmalite site na ihe karịrị mba 28 iji dozie nsogbu ịma aka nke ndụ dị oke mkpa maka ndị nọ n'obodo enweghị nchekwa n'ụwa niile.
ISHOW ndi otu akwukwo emeputala ngwa oru ndi ohuru iji dozie nsogbu dika ahụike nke nwa ebu n’afọ, mgbochi nri nri, mita mmiri ọka, ezigbo oku, nyocha oria, mmiri onunu, na ndi na egwe ihe ubi, na otutu ndi ozo ndi SDGs. .
Na nke a, ASME Executive Director, Tom Costabile kwuru, “Anyị bụ ndị mpako na-enye a forum maka injinịa-edozi nsogbu na n'ezie mma ndụ. Onyinye okike nke ndị ASME ISHOW sonyere na mmasị ha nwere maka inyere ndị obodo na-enweghị nchekwa gburugburu ụwa aka na-atọ anyị ụtọ oge niile. ”
Kwa afọ, ASME ISHOW jikọtara ihe ruru ndị ọhụụ 30 ahọpụtara na otu ndị ọka ikpe na ndị ọkachamara gụnyere agụmakwụkwọ, ndị nrụpụta, injinia, ndị ọchụnta ego, ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma, ndị ọkaibe, ndị injinia, ndị na-emepụta ihe, ndị na-etinye ego, na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ sitere na otu ndị isi na Kenya, India, na United States.
Ndị ikpeazụ nke 2021 ga-esonye na mmemme mpaghara emere na Eprel 29 maka India / Asia Pacific (ISHOW India), June 3 maka Middle East na Africa (ISHOW Kenya) na July 15 maka America (ISHOW USA). Companieslọ ọrụ atọ na ihe omume ọ bụla ga-esonye na ndị otu ISHOW 2021.
Olee uru m na-erite?
Finalists nke usoro ihe omume ga-enweta:
Akara nke $ 200,000 na onyinye mkpụrụ,
Nyocha sara mbara na nhazi ahaziri nke ndị ọkachamara
Nghọta teknụzụ na ọrụ imepụta site na usoro ISHOW siri ike,
Tonweta ahịa na azụmaahịa mmepe
Ohere iji nweta ego nke nkpuru site na ASME na
gosiputa ihe ohuru ha na Tech Gallery na ASME na Impact
ASME na-akwado nkwado nke Lemelson Foundation na ntinye ego afọ atọ yana ndị mmekọ mmejuputa ISHOW gburugburu ụwa.
Ndị anamachọ ihe nwere rue Tuesday, Eprel 6, 2021, iji tinye ntinye ha. Ọ bụrụ na ịnwebeghị, pịa Ebe a Na-etinye.
MasterCard kwadoo Kasha inye ụmụ nwanyị ike ma kwado Micro-entrepreneurs na Africa
Kpọọ maka Ngwa: USAID / Nigeria COVID-19 Securityma Aka Nchebe Nri